ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြားရှိသူများအတွက် အသုံးပြုရန် ယာယီခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရှိ ကျန်းမာရေးစင်တာတစ်ခုတွင် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပုလင်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကန်ဘာရာ၊ ဇူလိုင် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၂၅ သန်း၏ ထက်ဝက်ကျော်မှာ လော့ခ်ဒေါင်း (lockdown) ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် Pfizer ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြား အသက်အရွယ်များအတွက် အသုံးပြုရန် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ယာယီခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြား အသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချမှုရှိသည်ဟု Therapeutic Goods Administration (TGA) က ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Greg Hunt က ဇူလိုင် ၂၃ ရက်၌ ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ရှိသူများအတွက် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးလည်း ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအချိန်အထိ Pfizer ကာကွယ်ဆေးအား အသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများကိုသာ အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်လေ့လာမှုများအား စေ့စေ့စပ်စပ်အကဲဖြတ်ပြီးနောက် ယင်းအသက်အရွယ်များအတွက် ကာကွယ်ဆေးကို ခွင့်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း TGA က ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
“အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြားအရွယ်များတွင် အသုံးပြုရန် ယာယီခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းက ဘေးကင်းစိတ်ချမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို ပံ့ပိုးထားသော အချက်အလက်များအား စေ့စေ့စပ်စပ် အကဲဖြတ်မှု လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း TGA က ဆိုသည်။
“ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ကာလတို ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းစိတ်ချမှု အချက်အလက်ကို အခြေခံထားတာပါ။ ခွင့်ပြုချက်တွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့က လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေဆဲ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ ဈေးကွက်အလွန် အကဲဖြတ်မှုတွေကနေ ကာလရှည် ထိရောက်မှုနဲ့ ဘေးကင်းစိတ်ချမှု သက်သေအထောက်အထားပေါ် မူတည်နေပါတယ်”
ထိခိုက်လွယ်သော ကလေးငယ်များအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ ထွက်ပေါ်လခြင်းက “ကောင်းသော တိုးတက်မှု” ဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့နှင့် စကားပြောဆိုရာတွင် Hunt က ပြောခဲ့သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ၁၀.၆ သန်း ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၁၄.၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင် ၂၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းအထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၃၂,၄၂၇ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နောက်ဆုံးရအချက်အလက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည့် နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ်တွင် ဇူလိုင် ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်း၌ COVID-19 ကူးစက်မှုအသစ် ၁၃၆ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Pfizer COVID-19 vaccine provisionally approved for Australians aged 12-15
Source: Xinhua| 2021-07-23 10:06:54|Editor: huaxia
CANBERRA, July 23 (Xinhua) — Australia’s medical regulator provisionally approved Pfizer’s coronavirus vaccine for individuals aged 12 to 15 years on Friday when more than half of the country’s 25 million people were under lockdown.
Greg Hunt, the minister for health, on Friday announced that the Therapeutic Goods Administration (TGA) has ruled that the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is safe for 12-15 years age group.
Inastatement the TGA said the decision to approve the vaccine for the age group was made after careful evaluation of clinical studies.
Hunt said that conversations with the Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) about rolling out vaccines to vulnerable children were “well advanced.”
So far there has been about 10.6 million coronavirus vaccine doses administered in Australia. Approximately 36 percent of the adult population have received one vaccine dose and 14.9 percent are fully inoculated.
As of Thursday afternoon, there had been 32,427 confirmed cases of COVID-19 in Australia, according to the latest figures from the Department of Health.
New South Wales, Australia’s most populous state, on Friday morning reported 136 new locally acquired cases of COVID-19. Enditem
Photo : A caregiver showsabottle of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine inaHealth Centre in Alfortville, near Paris, France, on Jan. 8, 2021. (Photo by Aurelien Morissard/Xinhua)